मन पराइयो नालापानी « News of Nepal
मन पराइयो नालापानी
ऐतिहासिक फिल्म नालापानीको राजधानीमा विशेष प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली सेनाको मुख्यालयमा भएको प्रदर्शनीमा प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले फिल्म हेरेपछि आफू २०३८ सालतिर पुगेको महसुस भएको बताए।
आँखा झिमिक्क नगरी हेर्न सकिने फिल्म भएको भन्दै उनले नालापानीले नेपालको रक्षाका लागि पुर्खाले गरेको योगदान बिर्सन नदिने बताए। ‘युद्ध जित्नलाई हतियारले सहयोग गर्छ, तर बिनारणनीति हतियारले मात्र हुँदैन भन्ने सन्देश नालापानीमा देखिन्छ।’ –थापाले भने।
विशेष शोमा राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी तथा सचिवालय सदस्यलगायत ३ सय बढी नेपाली सेनाका अधिकारी सहभागी थिए। भीएफएक्सको अधिक प्रयोग भएको नालापानीको टिजर केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो, जसलाई निकै रुचाइएको छ।
सन् १८१४ मा देहरादुनस्थित नालापानी गढीमा भएको अंग्रेज–नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाइँलाई आधार बनाएर फिल्म निर्माण गरिएको हो।
प्राडा धनराज कुँवर र रामराजा कुँवरद्वारा लिखित नालापानीका नायक वीर बलभद्र कुँवर पुस्तकमा आधारित रहेर इतिहासविद्हरू प्राडा धनराज कुँवर, प्राडा त्रिरत्न मानन्धर, प्रा. दिनेशराज पन्त, प्राडा सुरेन्द्र केसी, पूर्वसहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेर नेपाली सेनाको पुस्तक सैनिक इतिहासलगायतका पुस्तकमा आधारित रहेर नालापानी तयार पारिएको निर्देशक रिमेश अधिकारीले बताए।
फिल्ममा देशभक्त खनाल, अर्जुनजंग शाही, सन्तोष पन्त, मनोज शाक्य, विशाल पहारी, विजय विस्फोट, पुजना प्रधान, गीता अधिकारी, महावीर विश्वकर्मा, इशान बिजु श्रेष्ठ, हिक्मत थपलिया, जनक बर्तौला, विशाल श्रेष्ठ, सहिना भट्टराई, गीत विष्ट, युगजंग कार्की, सिमन खड्का, सुशील खड्का ‘डेभिड’, बाल कलाकार तेजस्वी अधिकारी, हार्दिक थपलिया, प्रनिश शाक्य, निर्माण थपलियाका साथै विदेशी कलाकारहरू एन्ड्रोइन डंकन, रेचल मोलेस, पल विकिन्सन र सामलगायतले अभिनय गरेका छन्। रिमेश अधिकारी फिल्म प्रोडक्सन प्रालिको प्रस्तुति रहेको फिल्म बीजीबी इन्टरटेनमेन्ट र गंगानारायण फिल्म्स्को सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो।
नालापानीको परिकल्पना, निर्माण तथा निर्देशन रिमेश अधिकारीले गरेका छन्। फिल्ममा लेखन रिमेश अधिकारी र कृष्ण आचार्य, द्वन्द्व रोशन श्रेष्ठ, छायांकन रामशरण उप्रेती, सम्पादन विपीन मल्ल र भीएफएक्स वसन्त खत्रीको रहेको छ।
कोरोनालाई जिते बेलासेले- खल्तीमा दुई रुपियाँ